စာရေးခြင်းအနုပညာ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
September 11, 2008, 2:52 am
Filed under: Articles, Lin Let Kyal Sin
– စာရေးဆရာကောင်းဖြစ်ရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ
စိတ်ဝင်စားမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ ဒီpostအတွက်ရယ်၊ blog ကိုလာရောက်ဖတ်ရှုတဲ့ အတွက်ရယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Comment by sonata-cantata September 11, 2008 @ 4:07 am
ငါ့ညီမတော့ အလွန်တရာ အကျိုးရှိတဲ့ ဆီမီနာကို သွားတက်ခဲ့တာပဲကိုး။ စာရေးဆရာကောင်းဖြစ်ဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ဆိုတာတွေဟာ မှတ်သားစရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရေ။
Comment by ကလိုစေးထူး September 11, 2008 @ 4:31 am
စာရေးခြင်း အနုပညာကို လာဖတ်သွားပါတယ်။
Comment by ကောင်းကင်ကို September 11, 2008 @ 12:42 pm
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အင်မတန် အကျိုးရှိတဲ့ seminar ပါပဲ။ ဖတ်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
Comment by Moe Cho Thinn September 12, 2008 @ 4:32 am
Sis Lin Let…This isavery good post which relates your experience atavaluable seminar. There is always something new and precious to achieve in this kind of seminar and one ought to attend if the oppotunity smiles…!
[Sorry for Eng comment as Burmese font isn’t installed at work computer ;)) ]
Comment by Nyi Linn Thit September 12, 2008 @ 10:31 am
ကျေးဇူးပဲ မလင်းလက်ရေ။ စီဘောက်ပါတ်စ်ဝဒ်က မေ့သွားလို့ ဒါနဲ့ ကော်မန့်ခ်ဝင်ရေးခဲ့တယ်။ ဒီပို့လေးက ကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်လို မဖြစ်ညစ်ကျယ် စာပေ၀ါသနာပါသူတစ်ဦးအတွက်။ ဒီလိုပွဲမျိုးတက်ခွင့်ရတဲ့ မလင်းလက်လည်း တော်တော်ကံကောင်းတာပဲဗျာ။
Comment by နေသစ် September 15, 2008 @ 9:34 am
မမ အားကျလိုက်တာဗျာ..ညီမ စာအရမ်းရေးတတ်ချင်တာဘဲ..ညီမအတွေးအခေါ်တော့ကောင်းတယ် သူများနဲ့ မတူတာတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နေရာမှာ ၀ါသနာလဲအရမ်းပါတယ်.
ဒါပေမဲ့ စာဖတ်အား အရမ်းနဲနေတဲ့အတွက် အရေးအသားက ထင်သလောက်မကောင်းဘူး..မမ ပို့စ်လေးက တန်ဖိုးရှိတယ်..အခုလို
ကိုယ့်ရခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတ ကိုပြန်ဝေ ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး များရီးတင်ပါတယ်..:D
Comment by moon February 5, 2009 @ 5:18 pm